ကျန်းမာရေးအတွက် လုံးဝမသင့်ဟု တားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်သော ကျောက်ဂွမ်းမျှင် လုံးဝအသုံးမပြုပဲ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အလူမီနီယံဖြင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထား၍ မီးခံ (Fire Proof) ဖြစ်သည့်အပြင် အမိုး၏မျက်နှာပြင် အပူချိန်ကို မျက်နှာပြင် အပူချိန်ကို ၁၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မှ ၂၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိ လျှော့ချပေးပြီး အပူဖြာထွက်ခြင်းကို ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းထိ ကာကွယ်ပေးသည်။ဆူညံသံများကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးသည်။အစိုပျံမှုမရှိ၊ တာရှည်ခံပြီး သယ်ဆောင်တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေလွယ်ကူသည်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီ
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အခြားလုပ်ငန်းသုံး သန့် ရှင်းရေးပစ္စည်း ( Dust Pin )
NTS Myanmar ကုမ္ပဏီမှ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများတွင် သန့် ရှင်းရေးပစ္စည်း အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် တံမြက်စည်းနှင့်ဂေါ်ပြား ( Dust Pin ) ကို လူကြီးမင်းတို့အတွက်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်း ( Dust Pin ) များသည် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ အိမ် အဆောက်အဦးများတွင် သန့် ရှင်းရေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးဝင်သော သန့် ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် ၄င်း ( Dust Pin ) သည် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော သန့် ရှင်းရေး ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းသန့် ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း ( Dust Pan ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
NTS Myanmar ကုမ္ပဏီမှ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများတွင် သန့် ရှင်းရေးပစ္စည်း အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ဖုန်နှင့် အမှိုက်ရှင်းသော ( Dust Mop ) ကို လူကြီးမင်းတို့အတွက်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်း ( Dust Mop ) များသည် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ အိမ် အဆောက်အဦးများတွင် သန့် ရှင်းရေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးဝင်သော သန့် ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် ၄င်း ( Dust Mop) သည် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော သန့် ရှင်းရေး ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းသန့် ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း ( Dust Mop ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Construction လုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံး Crocodile Skim Coat
Tiger Supply Company မှတင်သွင်းရောင်းချနေသော cera c cure အမှတ်တံဆိပ် Crocodile Skim Coat Sandedသည်အက်ကြောင်းများကိုဖာထေးပေးပြီးမညီညာသောမျက်နှာပြင်ကိုချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။မျက်နှာပြင်ချောကြမ်းမှုပြုလုပ်ရန်ဆေးမသုတ်ခင်မှာအသုံးပြုနိုင်ပြီးအလွှာလိုက် coating အတွက်အထူ(3-6mm)အထူပေးပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေပါဝင်မှု-၁.၁ ကီလို/စတုရန်းမီတာ(1-mm အထူ) နှင့် အရွယ်အစား မှာလည်း 25kg အိတ်အမျိူးအစားဖြစ်သည်။
Space Wall UPVC နံရံကပ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ
UPVC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Space Wall များသည် ရေစိုခံ၊ အကြမ်းခံခြင်း၊ နံရံအလှဆင်ခြင်းတွင် သုံးနိုင်ရုံသာမက မျက်နှာကျက် အဖြစ်လဲ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ၀ရံတာ မျက်နှာကျက် နှင့် ပေါ်တီဂို မျက်နှာကျက်များတွင် သုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊ Wet area များတွင် သုံးစွဲခြင်းဖြင့် Moisture ကြောင့် မျက်နှာကျက်များ မှိုတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ အခန်း Partition များ ကာရံခြင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း အရောင်5မျိုးရှိ၍ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ကြပါသည်။ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူလိုပါက အီးမေးလ်မှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းနံပါတ်ကို တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆို၍ဖြစ်စေ မှာယူနိုင်ပါသည်။
ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော သေသပ် လှပသည့် ကြမ်းခင်း ( Flooring )
Green Gold Industrial ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ကျွန်း၊ ပိတောက်၊ ပျဉ်းကတိုး စသည့် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော သစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကြမ်းခင်း ( Flooring ) များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။၄င်း ကြမ်းခင်း ( Flooring )များသည် လှ ပပီး ဒီဇိုင်းဆန်းသည့် အပြင် ကြာရှည်အသုံးခံသော ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်များတွင် ၄င်း ကြမ်းခင်းများကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်၊ ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်း၊ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင်တို့ တွင်လည်း ၄င်း ကြမ်းခင်း ( Flooring )များကို အသုံးပြု အလှဆင်နိုင်ပါ သည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဒီဇိုင်းဆန်းပီး ကြာရှည်အသုံးခံသော ကြမ်းခင်း ( Flooring ) များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Green Gold Industrial ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက် သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Handrail Steel လက်ရန်းတိုင်များ
ခေတ်မှီလှပဆန်းသစ်သော ၀ရန်တာနှင့် လှေကားလက်ရန်းသုံး Handrail Steel တိုင်များကို ကျွန်တော်တို့၏ Royal Marine ကုမဏီမှ Korea မှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းပြီး ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။ တိုင်လုံးများမှာ Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံချေးမတက်ဘဲ အမြဲတောက်ပြောင်ခြင်း လက်ရန်းမှာ အလွယ်တကူ အကွေးအကောက် ပုံဖော်နိုင်ခြင်းနှင့် ဆက်ရာ မရှိခြင်း ၀ရန်တာ၊ လှေကားလက်ရန်း၊ အကာများ အနေဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း တိုင်မသုံးဘဲ နံရံကပ် လှေကားလက်ရန်းအဖြစ် တပ်ဆင်နိုင်ခြင်း စတဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့် လူကြီမင်းတို့၏ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူလိုပါက အီးလ်မေးသို့ ဖုန်းနံပါတ်မှ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
SCG အမှတ်တံဆိပ် Smartboard
Tiger Supply မှတင်သွင်းနေသောပစ္စည်းများစွာထဲမှSCG Smartboard အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။ ✅SCG SmartBOARD သည်ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေကိုသုံးကာမြဲမြံကျုံ့ဆံ့နည်းပညာကိုသုံးကာထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့်တောင်းတင်းကြံခိုင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းညွှတ်လွယ်မှုတို့ကိုပါတပါတည်းရရှိစေပါသည်။ ✅SCG SmartBOARD တွင်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်ဘိလပ်မြေ၊ဆီလီကာ နှင့် ဆဲလူလို့စ်ဖိုင်အချိုးကျပါဝင်ကာဖိအားဖြင့်ပေါင်းခံထုတ်လုပ်မှု( Autoclave ) ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီးနံရံ၊မျက်နှာကျက်၊ကြမ်းခင်းများကိုအိမ်တွင်းအိမ်ပြင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ✅SCG SmartBOARD ပုံစံမျိုးစုံအတွက်အသွင်ပြောင်းညွှတ်ကွေးနိုင်ပြီးမြင့်မားသောခံနိုင်အား၊ရေဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်ဆွေးမြေ့မှုကင်းစင်ပြီးခြစားနိုင်ခံအောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။အလေးချိန်လဲပေါ့ပါးပြီးအပူဒဏ်ခံနိုင်ကာလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်၊မန္တလေး ၊ နေပြည်တော်၊ တောင်ကြီး၊ စစ်တွေ စသည့် အရောင်းဆိုင်ခွဲများတွင် ပစ္စည်အသင့်ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါသည်။ 4mm2&#039;x2&#039;-800kyats 4mm4&#039;x4&#039;-3400kyats 4.5mm8&#039;x4&#039;-8450kyats 6mm8&#039;x4&#039;-11400kyats 8mm8&#039;x4&#039;-15300kyats For More Information
Wet-formed mineral ﬁber (Non-asbestos) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော Bioguard Mineral Fiber မျက်နှာကျက်ပြားများကို Food Manufacturing and Laboratories, Education (Science Labs), Computer rooms များအတွက် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နူးညံ့ပြေပြစ်သော မျက်နှာပြင်ရှိခြင်း၊ အသံလုံခြင်း၊ အလင်းပြန်ခြင်းအတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ Fire Resistance -Class A: BS 476 Part6&amp;7ပါရှိသည့်အပြင် Sag Resistance- RH 99% ပါရှိသောကြောင့် စိတ်ချ ယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်သော မျက်နှာကျက် အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ သပ်ရပ်လှပပြီး နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မီ၍ အရည်အသွေးစိတ်ချရသော မျက်နှာကျက် များကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ Acoustic Architecture Co.Ltd ကိုသာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ လို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်မှ ဖြစ်စေ၊ အီးလ်မေးလ်မှတဆင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါတယ်။
အပူနှင့်အသံ ကာအဖြစ်အသုံးပြုသော Rock Wool
Tiger Supply Company မှအပူနှင့်အသံကာအဖြစ်အသုံးပြုသော Rock Wool များကိုဈေးနှန်းမှန်ကန်စွာဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။လူနေအဆောက်အဦးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးများရှိမျက်နှာကျက်များတွင်အပူကာပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။သာမန်ထက်လွန်ကဲသည့်အပူချိန်အတွက်ကာကွယ်ပေးပြီးအပူရှိန်မြင့်တက်သောနေရာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ✔️INSTOCK NOW✔️ For more information
မြန်မာနိုင်ငံသားများ အရည်အသွေးမှီ၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမှီသော PAP အုတ်များကို အသုံးပြုနိုင်ရန် တင့်သင့်သောဈေးနှုန်း၊ ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့မူကြောင့် လျှင်မြန်သောတည်ဆောက်မှုကိုရရှိနိုင်စေရန် ဂျာမန် နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ခံနိုင်မူစွမ်းအားပြည့် အဆင့်မြင့် ဘိလပ်မြေ ကွန်ကရစ် ရှစ်ပေါက်စက်အုတ် ဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦးအတွက် လိုအပ်သလောက်ကို PAP Group တွင် မှာယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်နော်။
The new HiPer V dual frequency GNSS receiver isacompact, cable-free solution with Vanguard Tehcnology for all GNSS positioning applications. Newest Features Include: Vanguard Technology 226 GNSS Channels Rugged, Magnesium Alloy Construction Integrated RTK and Static Receiver Fence Antenna Advanced Performance Topcon HiPer V UHF Dual Base &amp; Rover System Kit The new model has added Vanguard Technology’ s 226 channels and fence antenna intoaversatile, configurable receiver. The additional channels and precision antenna element make RTK positioning faster and more productive than any other receiver on the market. Vanguard Technology is Topcon’ s new, cutting edge 226-channel ASIC tracking all current and upcoming GNSS constellation and signals with superior performance, accuracy, and sensitivity. Vanguards system-on-chip design enables multiple embedded cores and memory with comprehensive peripheral interface support increasing board-level flexibility and reliablility while reducing integration complexity. The ASIC supports the Linux runtime environment for custom application development further facilitating application-specifici workflows and simplifying hardware design. All of Vanguards features efficiently run onacompact footprint with reduced power consumption. Vanguard Technology Features Include: 226 universal channels for maximum flexibility in GNSS signal tracking Compact system-on-chip, multicore design with small integration footprint L1/ L2/ L5 triple-frequancy signal support L-Band signal demodulator Modernized multi-constellation support for GPS, GLONASS, Galileo &amp; Compass Increased sensistivity for superiour signal tracking in shaded environments Comprehensive peripheral interface support Reduced power consumption
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး Latex Portlant Cement Mortar
မင်္ဂလာပါရှင်။လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန် one stop service ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။